Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukubambisa » I-Holland America Line ibuyele kwishishini
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukubambisa • iindaba • Tourism • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
U-Nieuw Statendam waseHolland America Line umke eFort Lauderdale, eFlorida, namhlanje kuhambo lwakhe lokuqala okoko kukhe kwanqumama kwishishini kulo nyaka uphelileyo. Inqanawa iphawula inqanawa yesihlanu yeHolland America Line ukuba iphinde ingene kwinkonzo, ijoyina iRotterdam, iKoningsdam, iEurodam neNieuw Amsterdam.
Ukukhumbula esi siganeko, iHolland America Line ibambe umsitho wokusika iribhoni kwi-terminal ukuze kuvulwe inqanawa, kwaye amalungu eqela abulisa iindwendwe nge-fandegi ephephezelisa iflegi njengoko babekhwela enqanaweni. Ingxelo yeNieuw banduluka ngohambo lweentsuku ezisixhenxe olukwintshona yeCaribbean oluya kutyelela eNassau, eBahamas; e-Ocho Rios nasePort Royal, eJamaica; kunye neHalf Moon Cay, isiqithi sabucala saseHolland America Line eBahamas.
Ingxelo yeNieuw iya kuchitha ukususela ngoNovemba ukuya kutsho kuEpreli kwiCaribbean kuhambo ngolwandle olususela kwiintsuku ezisixhenxe ukuya kwezili-11, lonke uhambo lokuya nokubuya lusuka ePort Everglades yaseFort Lauderdale. Iindwendwe ezijonge uhambo olude lokubaleka zingangena kuhambo lwabaQokeleli - uhambo oludityanisiweyo lokubuyela emva olubonelela ngophononongo olunzulu olugubungela indawo enye yommandla.
Lonke uhambo lwaseCaribbean lubandakanya umnxeba eHalf Moon Cay, kwisiqithi saseBahamian esiphumelele ibhaso sabucala seHolland America Line. Le ngcwele intle iye yaguquka yaba yindawo yokudlala yetropikhi yeendwendwe zokuhamba ngenqanawa kwaye ibonisa iilwandle ezinesanti emhlophe; iivillas ezinemigangatho emibini kunye neekhabhana zabucala; iindawo zokutyela ezimnandi njengeTyotyombe leLobster; ipaki yamanzi yabantwana; kunye neentlobo ngeentlobo zokhenketho oluzaliswe lulonwabo lwabathandi bendalo, abahambi abanomdla kunye nabakhenkethi.
IHolland America Line ibisoloko ithunyelwa ekhaya isuka ePort Everglades ukusukela ngeminyaka yoo-1990. Ngokusebenza, utyelelo ngalunye lwenqanawa lunikela ngeedola ezingama-364,000 ngokuthe ngqo kuqoqosho lwendawo ekuboneleleni ngayo (amafutha, ukutya, iintyatyambo, ukulungiswa kwepiyano, izixhobo, njl.), irhafu yezibuko kunye nenkcitho. I-Holland America Line isebenza nabathengisi abaphantse babe li-100 baseMzantsi Florida ababonelela inkampani kunye neenqanawa zayo ngempahla kunye neenkonzo.
Ukutyhubela iminyaka, iHolland America Line ibizibandakanya ngokukhutheleyo nemibutho engaphezulu kwe-30 engenzi nzuzo eMzantsi Florida ngokunika, isidlo sasemini senqanawa, kunye neminikelo yokuhamba ngenqanawa, kubandakanya iSeafarers 'House, Henderson Behavioral Health, Coast Guard Women's Leadership Initiative, Symphony of the Americas, Umbutho weOpera kunye nokunye.